बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ४३ वर्षकी भएकी छिन् । जब बलिउड अभिनेत्रीको फिटनेसको कुरा आउँछ त्यहाँ शिल्पा शेट्टीको नाम अगाडि आउँछ ।
Posted on October 1, 2021 October 1, 2021 Author khabar silo
आँफुभन्दा १० वर्ष कान्छा ह्याण्डसमसँग विबाह गरिन् चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठले, विबाहमा लेहेंगा मात्रै किनिन् १५ लाखको, सुटुक्क गरिएको विबाहको एउटा क्लिप बन्यो भाइरल, हेर्नुहोस् उक्त भिडियो सात महिना यताकै न्यून रकमको कारोबार,किन घट्यो कारोबार ? यसले के सङ्केत गर्छ ? बिहीबार सात महिना यताकै न्यून कारोबार भएको छ। शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजारमा बिहीबार […]